A Bare Barebones Kọmputa Akụkọ maka gị ... | Martech Zone
Thursday, August 9, 2007 Thursday, August 9, 2007 Douglas Karr
Kọmputa 4 ikpeazụ m zụtara n'ụlọ m wuru onwe m. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ego na sistemụ, mụta ntakịrị banyere kọmputa ma nweta ike maka akụrụngwa gị… pịa njikọ barebones na nnukwu ụlọ ahịa kọmputa dị n'ịntanetị. Na nwa m nwoke gawa IUPUI (n'abalị a), achọrọ m iju ya nnukwu usoro!
Enwere m ego na akaụntụ PayPal m, yabụ ekpebiri m ịchọ ụlọ ahịa kọmputa nke jiri PayPal eme ihe dịka usoro ịkwụ ụgwọ. Ikekwe ndị kasị ewu ewu bụ TigerDirect, nnukwu ụlọ nkwakọba ihe n'ịntanetị maka ngwá electronic, kọmputa na akụkụ. M họọrọ a barebones usoro a na-akpọ “Gladiator“, Nkecha bụrụ na-achọ ọ bụla ngwaọrụ (niile nke draịva na mmiri slide na snap na tinye n'ọrụ pụrụ iche brackets.
Taa, nwa m nwoke natara nke ikpeazụ n’ime ihe ndị mejupụtara site na UPS wee bido itinye anụ ọhịa ahụ ọnụ. Ihe agbanweela kemgbe oge ikpeazụ m zụtara sistemu ịgba egwu, ọ bụ ezie! Tupu m amalite, m na-enweta ozi-e TigerDirect na-ekwupụta na m ga-pịa njikọ iji kwụọ ụgwọ akwụkwọ ọnụahịa m. Nsogbu ahụ? Ego ahụ apụla na akaụntụ m!
Akpọrọ m nọmba nkwado ahụ ma jide n'aka na nzụta ahụ ejidere ruo mgbe m kpọrọ. Cheedị banyere nke ahụ! Ha weere ego m ma chọọ nkwenye tupu ha eziga ihe ha. Mma mma? Agwara m ha na ha kwesịrị ikwu na nke ahụ ga-eme na email ahụ. Ngwanụ.
Echetara m mgbe ị na-azụbu sistemu ịgba egwu, ị nwere ike ịtụfu akụkụ ole na ole na sistemụ ahụ - na-abụkarị draịvụ ike na DVD-RW, ị dịkwa njikere ịga. Ngwunye a na-agba agba na-eji draịvụ ike abịa, ọ bụ ezie… ụdị.
Ọ bụrụ na ị gaa na ngwaahịa ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe abụọ dị ịtụnanya nke mmadụ (dịka m) ga - atụ uche:
Enweghị fan maka nhazi! Nke a bụ ihe dị oke mkpa maka ihe ọ bụla na-arụ ọrụ ọgbara ọhụrụ ọ nweghịkwa ihe kpatara ọ ga - eji hapụ ihe osise.
Cheta draịvụ ike? Ha nyere draịvụ ike 200Gb Maxtor EIDE. Ọ dị mma, ọ bụ? Ikekwe… ma e wezụga na usoro kachasị maka Serial ATA (SATA)! Site na mgbakwunye ihe nwatakiri m, ọ nweghị ebe ọ bụla ga-etinye draịvụ draịva.
Ya mere nwa m nwoke gara mahadum taa na-enweghị kọmputa. Ọ na-anọdụ n'ọtụtụ iberibe n'elu tebụl kichin… nke onye ọ bụla na-abaghị uru. Njikwa The akwụkwọ ọbụna eme nzuzu. Echetaram mgbe mbu iji motherboard na enweta akwukwo, ugbu a, enwetara m mpempe akwụkwọ na enweghi nkọwa. Nke a bụ ihe nkoropụ. O doro anya na enweghị nloghachi na draịvụ ike, ma. Ug. Ikekwe, m ga-enye ya ya na saịtị ahụ ma ọ bụrụ na enweghị m ike iji ya mee ihe ọzọ.
Naanị isi mkpịsị aka m nwere maka TigerDirect nọ na ngwa ngwa nnyefe nke akụkụ. Site na ịkwụ ụgwọ (ntọhapụ) ruo n'ọnụ ụzọ, naanị ụbọchị azụmahịa abụọ gafere. Ọ bụghị ihere. A na-enwe olileanya na di na nwunye ọzọ akụkụ-eme ka ebe a site Saturday! Bill ga-alaghachi na Sọnde - enwere m olile anya na m nwere ike ịhazi usoro ya!
Aug 9, 2007 na 10:11 PM
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị chọta ụlọ maka draịvụ ike ka m mara etu ị chọrọ maka ya Doug n'ihi na ọ ga - eme ngbanwe magburu onwe ya maka ọdịda 40 dara ada na igwe mgbasa ozi nwunye.
Otu nwoke nke ọgụgụ isi gị na izugbe maara otú e kwesịrị isi jiri Mac! MacBook mara mma ga-eme igwe dị egwu iji wepụ!
Echiche kacha mma site na anwụ na-acha England (maka otu oge!)
Naanị gụọ ọkwa ọzọ ma ị bụ nwoke Mac. Top stof!